Ọhụrụ Ren Rebel na-eweta ngwaahịa ọhụrụ ya na IFA 2019 | Akụkọ akụrụngwa
Fresh na Rebel na-enye Twins ahụ, CLAM ANC DGTL na Bold X na IFA 2019
Eder Esteban | | Ngwa, Foto na ụda
Fresh ´n Rebel bụ ụdị ọzọ dị na mbipụta IFA nke afọ a. Companylọ ọrụ ahụ ahapụwo anyị ọtụtụ ngwaahịa ọhụrụ na ngosi a na mmemme a ma ama. Akwukwo ihe omuma ndi edeputara n'ahia n'ime onwa ndia nile, dika ulo oru ya gosiputara na ihe omume a na Berlin.
Otu n'ime ha bụ mbụ Ezi Ikuku ekweisi site na ụlọ ọrụ ahụ, ihe ọhụrụ CLAM ANC DGTL nke na-enye mmụgharị mkpọtụ dijitalụ dị mma na ụda dị ọcha karịa na Rockbox Bold X na Bold XS ọhụrụ, ndị ọkà okwu mbụ na ahịa na-enye ụda na-akpali akpali, iguzogide mmiri na nke na-abanye na n'akpa uwe na mfe ekele ya kọmpat imewe. A nso nke kasị zuru ezu nke Fresh na Rebel.
1 Fresh Ren Rebel Bold X: Igwe okwu ikuku mmiri na-enweghị mmiri
2 NKỌM: Mkpu Ọhụrụ Na-akagbu Isi
3 Ọhụrụ Remụnne Rebel: Ezi ekweisi na ezi
Fresh Ren Rebel Bold X: Igwe okwu ikuku mmiri na-enweghị mmiri
Companylọ ọrụ ahụ hapụrụ anyị nke mbụ ọhụrụ gị waterproof Bluetooth (wireless) ọkà okwu, the Bold X. A na-eme ọkà okwu a iji soro gị gaa ebe ọ bụla ekele maka obere obere ya na obere. Ọ na-eguzogide mmiri, otu n'ime njirimara ya kachasị mkpa.
Ekele maka akụkụ ya dị nro, ụdị ya dị larịị na akwa akwa mmiri na-eguzogide mmiri nke IPX7, Bold X ezubere iji soro ndị na-enupụ isi na ndị na-enweghị atụ nwee ahụmịhe ha ọ bụla. Na mgbakwunye, ụdị ebughibu na nke dị fechaa na-eme ya anyị nwere ike iburu anyị mgbe niileka ọ na-adaba na akpa gị. Batrị nke Fresh ´n Rebel Bold X na-enye anyị ihe dịka 8 awa nke playback na-enweghị nkwụsị.
N'agbanyeghị obere ya, na-anọchi anya maka ọdịdị nke ụda ya. O nwere ụda doro anya, mana ọ dịkwa ike. Na mgbakwunye, ọ nwere igwe okwu agbakọnyere nke na-enye gị ohere ọ bụghị naanị ige egwu gị, kamakwa ịkpọ ndị enyi gị. Ọhụrụ a ọkà okwu na-launching na isii pụrụ iche Fresh? N Rebel agba. Ya ire price ga-abụ naanị € 79,99.
NKỌM: Mkpu Ọhụrụ Na-akagbu Isi
Ngwaahịa ọzọ nke akara ahụ na-ahapụ anyị bụ igwe ekweisi ọhụụ ọhụụ karịrị nke mkpuchi Clam ANC DGTL. Nlereanya a dị elu karịa ihe niile maka ịnwe ya ohuru Digital Noise No na-akagbu mkpọtụ mkpọtụ. Ekele ya, ụda mpụga na-ebelata ọbụna karịa ọrụ ANC ọkọlọtọ, ma n'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịnụ ụtọ egwu gị na ịma mma ya, na-ewepụ ihe niile gbara gị gburugburu.
N'aka nke ọzọ, ekweisi Fresh Ren Rebel nwekwara Ọnọdụ Ambient, nke na-enye gị ohere ige ntị n'ihe niile mgbe ị na-ege egwu, yabụ na ị gaghị efu ihe ọ bụla. Otu n'ime ọrụ kpakpando dị n'ime ha bụ na mgbe ị na-ewepụ ha ma tinye ha, abụ ahụ dị n'otu oge ị hapụrụ ya. Ya batrị nwekwara Ike 26 playback ikike enweghị nkwụsị.
Ọ bụ a wireless ekweisi na-arụ ọrụ na Bluetooth. Anyị ga-enwe ike ijikwa ọkpụkpọ ya na bọtịnụ akụkụ ya ma ọ bụ jiri enyemaka olu nke ekwentị gị site na igwe okwu agbakwunyere. Ha na-adị mma iji eyi ma nwee ike ịpịa ngwa ngwa, iji buru anyị mgbe niile. A na-ahapụ ekweisi ndị a na agba abụọ: ndị dị jụụ ma sie ike Steel Blue na nkecha na siri Silky Sand. Ọhụrụ Rebel na-egosi na ha na-akwụ ụgwọ na ụgwọ nke 199,99 euro.
Ọhụrụ Remụnne Rebel: Ezi ekweisi na ezi
Nke ikpe azu, ohuru ohuru ohuru rapuru anyi umu ejima ya. Ọ bụ Ezi Ikuku ekweisi, nke na-abata na obere obere ma daba na ntị gị n'ụzọ zuru oke, ha dị na agba 6 pụrụ iche dabara na uwe ọ bụla, ụdị mmadụ ma ọ bụ ọnọdụ ma hazie ya na mkpa nke ndị na-eri egwu egwu, ndị hụrụ ejiji na ndị hụrụ n'anya n'anya.
N'ihi ọdịdị ha, ekweisi ndị a anaghị apụ apụ mgbe ị na-eji ha ma ọ dị mma iyi. Na mgbakwunye, ha na-eguzogide ọsụsọ, ka ị nwee ike iji ha mgbe ị zụrụ n'oge ọ bụla. Igweisi a na-eji njikwa mmetụ aka yana ndị na-enyere olu aka: dakọtara na Siri ma ọ bụ Google Assistant nke ekwentị gị. Obere igbe nkwụnye ọkụ na-enye gị ohere ịnwe batrị mgbe niile. Otu ụgwọ na-enye anyị aka elekere 4 nke egwu na-enweghị mgbagha. Will ga-enwe ike ịgba ha ụgwọ ugboro ise na otu ụgwọ si na igbe ya, yabụ na anyị agaghị echegbu onwe anyị gbasara ọchịchị ya n'oge ọ bụla.
A na-ewepụta ekweisi Twins True Wireless na ngụkọta nke agba isii dị iche iche. Otu ekweisi na-enye anyị ụda dị elu, nke ahụ na-akwụkwa ụgwọ ụgwọ mgbe niile. Companylọ ọrụ ahụ kwadoro na ha malitere ụlọ ahịa na ọnụahịa nke naanị 99,99 euro na agba ya niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Fresh na Rebel na-enye Twins ahụ, CLAM ANC DGTL na Bold X na IFA 2019
Ebe a na-adọba ụgbọala: Jiri ekwentị gị mepee ụzọ ndọba ụgbọala gị (koodu ntinye ego 30%)
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị bụ Facebook Tinder ọhụrụ